Dhagayso Fartuun Birimo oo Digniin u dirtay Fanaaniinta Cusub. - iftineducation.com
Dhagayso Fartuun Birimo oo Digniin u dirtay Fanaaniinta Cusub.
aadan21 / April 19, 2013
iftineducation.com – Fanka Soomaalida oo maalin kasta ay soo galaan in ka badan 10 qofood ayaa mar qura waxaa laga war helay Heeso is qab qabsi keena iyadoona ay sheegtaan Fanaaniinta cusub heeso horay loo qaaday waxaana arinkaasi ka jawaabtay Fanaanada Fartuun Birimo.
Qeyla dhaanta fanaanadani kasoo yeereysa ayaa ka danbeysay kadib markii lagu qabsaday hees ay horay usoo qaaday taasoo ugu danbeyn sheegtay in aysan habooneen in lasoo maanguursho hees horay loo curiyey lana dhaho waa mid aniga ii gaar ah.
Fanaanada oo si kulul u canaanatay fanaaniinta cusub ayaa dhanka kale fariin u dirtay qofka sida gaarka ah u xaday heeskeeda kuna tilmaamtay wax aan…..
HALKAAN HOOOSE KA DHAGAYSO CODKA FANAANADA GUJI HALKAAN
Ninkaagu Waa Mid Aad U Kulul? Tahliishaan Ku Rushee Waliga Dambe Kuleyl Kuma Arkeyside
Nin Caruus Ah Oo Garaacay Xaaskiisa Habeenkii Aqal Galka, SABAB? Akhri dhacda layaab leh.